प्रतिष्ठा जानकारी - प्रतिष्ठा Informant मा सुविधाहरु को एक किस्म को लागी तपाइँको ईमेल प्रतिष्ठा को निगरानी शामिल छ। यसको सबैभन्दा लोकप्रिय पक्ष मध्ये एक 250ok समाधान उनीहरूको हो करीव million 35 करोड डोमेनहरूको स्प्याम जाल नेटवर्क। यस डाटाको पहुँच ईमेल मार्केटर्सको लागि कुनै दिमागमा रहनेछ। आकार र स्प्याम जाल नेटवर्क को गुणस्तर, र त्यो वास्तविक समय डाटा (उदाहरणका लागि, जाल हिट दिन द्वारा हिट, आईपी, डोमेन, विषय रेखा, देश), एक प्रेषकको रूपमा मलाई धेरै अपील गर्दछ। कालोसूची अनुगमन? यो डाटा रियल-टाइममा उपलब्ध छ, र तपाइँ सूचिहरूमा केन्द्रित गर्नको लागि अनुकूलित सतर्कताहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित गर्दछ। मलाई अनुकूलन गर्न को लागी लचिलोपन छ कि कसले सचेत प्राप्त गर्छ र कसरी त्यो सचेत गराईन्छ (जस्तै, ईमेल, SMS)।
इनबक्स जानकारी - मार्केटरहरूलाई परिष्कृत वास्तविक-समय उपकरणहरू चाहिन्छ तिनीहरूलाई ईनबक्समा ल्याउन मद्दत गर्न। इनबक्स जानकारीले तपाईको मेलको कती इनबक्स, स्प्याम, र कति हराएको देखाउँदछ। तपाइँ अभियान द्वारा विशेष ईमेल डेलिभरेबिलिटी मुद्दाहरूलाई भत्काउन सक्नुहुन्छ, जुन धेरै उपयोगी छ। बीचमा मैले देखेको कुञ्जी भिन्नताहरू मध्ये एक 250ok र रिटर्न पथ २ok० को बीडसूची प्रस्ताव हो। कभरेज तुलना गर्नमा पक्रनु भन्दा पहिले तपाईको मेल पठाउने मेलबक्स प्रदायकमा केवल बीजहरू मात्र हुन्छन्। अवधि 250ok तपाइँले लेसनलाई त्यस मामिलामा लेजरमा मद्दत गर्नका लागि एक सिडलिस्ट अप्टिमाइजर उपकरण बनाउनुभयो। समग्रमा, दुबै कम्पनीले केही विशेष बीज राख्ने बीजको सूचीमा कम्तिमा भिन्नताहरू छन्, तर त्यहाँ हरेक मुख्य होस्टमा यसको विडंबना छ। दुबै कम्पनीहरूमा सम्भवतः तपाईलाई के आवश्यक छ वा यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
ईमेल जानकारी - डाटा चालित विश्व मा, खुला र CTR हरू पूरा कहानी बताउँदैन। ईमेल जानकारीको साथ २ok०ok को ट्र्याकिंग पिक्सेलको लाभ उठाउँदा तपाईंलाई कुन ग्राहकले सन्देश पढ्छन् र कति बेरसम्म, र कुन उपकरण प्रकार र अपरेटि system प्रणाली प्रयोग गर्दैछ भनेर बताउँछ। कुन लिंक वा CTA ले सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो? के तपाई समय पठाउन अनुकूलन गर्दै हुनुहुन्छ? ईमेल जानकारीले तपाईंलाई के काम गरिरहेको छ र के हैन भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं चलाख, छिटो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
डिजाइन जानकारी - प्रत्येक ईमेल मार्केटरले डिजाइनको वरिपरि केहि पूर्व उडान मूल्या do्कन गर्नु पर्छ, त्यसैले 250ok अग्रणी रेन्डरिंग विक्रेताहरूको साथ-बाहिर-बाकस एकीकरणहरू छन् एसिडमा ईमेल र लिटमस. डिजाईन इन्फर्मेन्टले तपाईंको क्रिएटिव परीक्षण गर्दछ सामान्य स्प्याम फिल्टरहरू सहित ब्याराकुडा, सिमेन्टेक, स्पाम एसासिन, आउटलुक, र अन्य बढिमा ताकि तपाईं पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको अभियान तैनात गर्नु अघि स्प्याम ट्रिगरहरू ठीक गर्न सक्नुहुन्छ।
एक गम्भीर डेटा वैज्ञानिक
अगस्ट,, २०१ 16 2016:२१ अपराह्न
ठिकै हो कि भर्खरै यो पोष्टको वैधानिकता समाप्त भयो "२ok०ok हाम्रो साइटका प्रायोजकहरू हुन् र म संस्थापक ग्रेग क्रिओसको राम्रो साथी हुँ"।
हो, म ग्रेगका साथ साथीहरू हुँ जसले एक दशक भन्दा पहिले यो दर्शन पाएका थिए र अहिले बजारका विशाल स्रोतसँग विशाल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। म आफ्नो आश्चर्यजनक समाधान मा शब्द फैलाउन मद्दत गर्न गर्व छ। र म हाम्रो प्रायोजकहरूको लागि पनि आभारी छु जसले यस साइटलाई समर्थन गर्छन् र हाम्रा पाठकहरूलाई थप जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्छन्। खुलासा पारदर्शी हुन्छन् र प्रशंसा गरिनु पर्छ, अज्ञात कमेम्बरले उपहास गरेको छैन वास्तविक नाम वा वास्तविक ईमेल ठेगाना प्रदान गर्न डराउँदैन।
यहाँ कुनै पनि अन्य Cert ग्राहकहरू रिटर्न पथ साझेदारहरूमा रोकिदैछन्? र पारदर्शिताको लागि धन्यवाद, डगलस! याद गर्नुहोस्, कुनै राम्रो काम सजाय हुँदैन। 😉
डगलस, लेख को लागी धन्यवाद; मँ सहमत छु कि तपाईका विकल्पहरूको बारेमा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ जब डेलिभरिबिलिटी पार्टनर छनौट गर्दा मँ चिन्तित छु, तथापि, तपाईले आफ्नो तुलनामा साँच्चिकै पक्षपातपूर्ण स्थिति प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुनुभयो किनकि तपाईको २ 250०ok को साथ तपाईको व्यावसायिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध दुबै छ, तपाईको प्रकटीकरणमा उल्लेख गरे अनुसार। मैले तपाईको फिर्ती पथको विश्लेषण भित्र धेरै प्रश्नहरू पनि नोट गरेँ र निराश छु कि तपाईले हामीमा यी खाली ठाउँहरू पूरा गर्न सहयोग गर्नुभएन। हाम्रो ईमेल अप्टिमाइजेसन समाधानका लागि उत्पाद मार्केटिंग प्रबन्धकको रूपमा, म ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन सहयोग गर्न पाउँदा खुशी छु - र अझै पनि हुँ।
तपाईंको एउटा प्रश्नको उत्तर दिनको लागि - हो, हाम्रो उपभोक्ता नेटवर्क प्यानलका सदस्यहरूले उनीहरूको मेलबक्स प्रयोग र सment्लग्नता डाटा पहुँच गर्न पछाडि फर्कने सहमति दिए। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यसमा थप जानकारी प्रदान गर्न पाउँदा म खुशी छु।
रिटर्न पथमा, हामी हाम्रो अनौपचारिक डेटाको गर्व गर्दछौं जुन हामीसँग हाम्रा समाधानहरू प्रदान गर्दछ र यस डाटाले हाम्रा ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने अन्तरदृष्टि। हामीलाई थाहा छ कि डाटा-संचालित अंतर्दृष्टि ईमेल मार्केटिंग कार्यक्रम सफलताको लागि आवश्यक छ, र यो महत्त्वपूर्ण छ कि मार्केटरहरूले उनीहरूका वास्तविक ग्राहकहरूबाट डेटामा आधारित निर्णयहरू गरिरहेका छन्। हामी यो कुरामा विश्वस्त छौं कि ईमेल मार्केटरहरू जसले वास्तवमै उनीहरूको ईमेल प्रोग्राम बढाउन चाहन्छन् र ईमेलबाट सुधार गरिएको आरओआई हेर्न चाहन्छन् रिटर्न पथको साथ साझेदारीमा लाभ उठाउँछन्। जैसा कि तपाईंले उल्लेख गर्नु भएको छ, हामीसँग डाटा, उद्योग सम्बन्धहरू, र विज्ञ ईमेल ज्ञान छन् जसले मार्केटर्सलाई ईमेलबाट उनीहरूको राजस्व बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ उनीहरूको ईमेल पहुँच अधिकतम गरेर, उत्तम ग्राहक सम्बन्धहरू निर्माण गरेर, र सुधारिएको स for्लग्नताको लागि उनीहरूको ईमेलहरूलाई अनुकूलित गर्दै।
समय प्राप्त गर्नका लागि धन्यबाद। कुनै चौडाई, पहुँच, र ट्रेल कि पछाडि पथ को डेलिभरेसिटी उद्योगमा ब्लाज छ भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का छैन। डाटा पहुँच मुद्दा पनि स्पष्ट पार्नु भएकोमा धन्यवाद।
प्रतिस्पर्धा जहिले पनि उत्कृष्ट हुन्छ, र हाम्रो आफ्नै ESP को लागि २ok० टोकको टूलसेट प्रयोग गर्नाले, हामी परिणामहरूसँग पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छौं। त्यसैले जब म साथी हुँ र तिनीहरू प्रायोजक हुन्, हामी उनीहरूको प्लेटफर्मको ग्राहक र प्रयोगकर्ता पनि छौं। त्यो प्लेटफर्म प्रतिक्रिया पूर्ण रूपमा पक्षपातपूर्ण छैन - म कहिल्यै प्लेटफर्मको लागि सिफारिस गर्ने छैन जुन मैले पहिलो हात प्रयोग गरिन।
डिसेम्बर १, २०१52016:२:12 अपराह्न
फ्रान्स मा एक डिलिभ्रेबिलिटी विशेषज्ञ को रूप मा, म चकित छु कि तपाईले सुन्तलाको सुन्तलामा प्रदर्शन वृद्धि बढाउनु भनेर सुझाव दिनुहुन्छ। सुन्तलाले आरपी प्रमाणीकरण प्रयोग गर्दैन।
हो उनीहरू गर्छन्: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
डिसेम्बर १, २०१ 18 2017:२:2 अपराह्न
म पनि एक मूल्य निर्धारण को बारे मा उत्सुक छु। म अहिल्यै २ 250०ok प्रयोग गर्दछु, तर २ 250०ok र फिर्ताको मार्ग बीचको सापेक्ष लागत तुलना नगरीकन म डेमो प्रक्रियामा जान हिचकिचाउने छु।